Chirevo cheFrance: ndezvipi? - UniProyecta
Munyika yegirama, zvirevo zvakakosha nekuti tinozvishandisa mazuva ese iwe usingaone. Izvi zvinotsanangurwa se mazwi anobatanidza mukwanisi kune chimwe chikamu chemitsara kuitira kutsanangura hukama huri pakati pezvinhu zviviri izvi.
Hukama uhu hwatakakuudza kumashure kuno hunowanzo semuenzaniso wekutungamira, chinzvimbo kana nguva asi vanogona zvakare kuve nechimwe chinangwa kupfuura icho chatakangokupa zita.
Ikozvino tarisa kune avo vanodzidza mutauro wechiFrench, zvirevo zvinogona kuva izvo zvakanyanya kukuomera iwe kuti udzidze kana chimwe chezvinhu zvakaoma kwazvo. Nei zvakadai? Nekuti mazwi, zvirevo, uye nzira idzo mazwi akanyorwa tsananguro muchiFrench vanotora nguva yekudzidza, kunzwisisa kana kubata nemusoro sezvo zvinotora nguva kuzvidzidza. Asi usazvidya moyo, pano tichakuratidza iri nyore nzira.
Zvino ngatisiyanisei mhando dzezvibvumirano kuitira kuti iwe ugove uchizviziva iwe, kutanga isu tine iyo chinzvimbo uyezve iyo yenzvimbo (kuenda kupi, kubva kupi, kupi).
1 ChiFrench chirevo chechinzvimbo
1.1 Chigadziro chisina de
1.2 Chigadziro ne de
2 Chigadziro chenzvimbo
ChiFrench chirevo chechinzvimbo
ari tsananguro dzeposition muchiFrench Ndidzo dzinowanzoisa chinhu muchadenga, ndiko kuti, vanozviisa, chakakosha ndechekuti dzinoshandiswa nenzira imwechete seSpanish, kungave kumberi kwezita kana kunogona kusanganisira chirevo "De".
Saka kuti iwe ugone kudzidza zviri nani uye unzwisise chikamu ichi, isu tinokamura zvirevo zvechigaro muzviviri, seinotevera: izvo zvisina kutakura neizvo zvinotakura.
Chigadziro chisina de
Chirevamwene muchiFrench chisina de ndidzo dzisingazombove ne "de" uye dzinogara dzichishandiswa pamberi pezvatinonyora. Pazasi isu tinokupa iwe mimwe mienzaniso kuitira kuti iwe ugone kuzvitungamira pachako mukudzidza yenyaya yakaoma iyi. Kutanga isu tinokuudza chirevo muchiFrench, zvino zvazvinoreva muchiSpanish uye pakupedzisira tichakupa muenzaniso.
Chakanaka ——–> kumberi / kumberi ——–> Ils t'attendent mberi la porte (vanokumirira pamberi pesuo)
Maodzanyemba ——–> nezve ——–> Le chat dort Sur iyo sofa (kati iri kurara pasofa)
Derrière ——–> kumashure ——–> Ndinozvipira un bruit shure moi (ndakanzwa ruzha kumashure kwangu)
Sous ——–> pasi / pasi ——–> J'aime mufambi sous la pluie (Ndinoda kufamba mumvura)
Kukaka——–> kupesana——–> La voiture s'écrasa pamusoro le mur (mota yakarovera kumadziro)
Mumufananidzo uri pazasi isu tinokusiira iwe mimwe mienzaniso yezvinyorwa muchiFrench pasina de kuti iwe ugone kudzidza, saka isu tatoitika nerumwe rudzi rwechirevo.
Chigadziro ne de
Rudzi urwu rwezvigadzirwa zvinotakura "kubva" kuti ugone kureva chimwe chinhu, kana kugona kupedzisa chirevo chine ruzivo. Asi dzimwe nguva hazvidiwe kushandisa iyo "ye" nekuti inoshandiswa zvachose.
Pano isu tichakuratidza iwe kuenzanisa:
Elle habite tout pedyo chez moi.
Anogara padhuze nepamba pangu
Elle habite tout pedyo.
Anogara padhuze nepadyo.
Pazasi iwe unenge uine runyorwa rwakakwana nezvinyorwa muchiFrench zvine "de" (sezvatakaita pakutanga, isu tichatanga kukuudza chirevo muchiFrench, uye muchiSpanish uyezve nemuenzaniso mumutauro wechiFrench).
Près de ——–> near ——–> Il ya une taxi station pedyo la gare (Kune renji yetekisi padyo nechiteshi chechitima)
au-dessous de ——–> pazasi ——–> Iyo température iri pazasi de zéro (Iyo tembiricha iri pazasi zero)
au milieu de ——–> pakati pe ——–> À l'instant, je me sens au milieu de nulle chikamu (Parizvino, ndinonzwa pakati nepasina)
Loin de ——–> kure ne ——–> Gardez les enfants muchiuno che l'étang (Chengetedza vana kure nedziva)
Kana tikatarisa zvakanaka, "kupi", "kupi" kana "kubva kupi" ivo vanoreva zvakafanana asi isu tiri kungochinja chirevo, handiti? Chatinoziva ndechekuti tsamba "a" muchiSpanish inoratidza kwaunoda kuenda kana nhungamiro, "kubva" inoratidza guta raunogara kana kwawakatangira uye pakupedzisira "mu" rinoratidza nzvimbo kana nzvimbo yatinogara.
Ndiri kuenda kuBuenos Aires.
Ndiri muma buenos aires.
Ndinobva kuBuenos Aires.
Tichaona kuti muchiFrench zvirevo zvakafanana zvinoshandiswa kuti "kupi" uye "kupi", unenge uchifunga kuti unoita sei kuti uzive, mhinduro ndeiyi kuti unofanirwa kutarisa chiito uyezve muchirevo chemutsara Pasina imwezve ado, nyatsoteerera nekuti unofanirwa kucherechedza chirevo chekushandisa nekuti unogona kuita kuti mutongo wako usaite zvine musoro.
Ndiri kuenda kuParis.
Tinovimba chinyorwa ichi chakubatsira iwe kuongorora kana kudzidza uyu musoro muFrench, tinokushuvira rombo rakanaka pakudzidza kwako, uye kuti zviite nyore kwauri, heino vhidhiyo inotsanangura musoro wenyaya:
Maawa acho muchiFrench: unovaudza sei?
kudzidziswa » Mitauro » French » Chirevo cheFrance: ndezvipi?